1. Nkọwa nke Ozi Nkeonwe
Ihe ọmụma zuru ezu banyere nleta gị na weebụsaịtị na ihe onwunwe ị nwetara. Kuki na-anakọta ọtụtụ ozi, dị ka adreesị IP, sistemụ arụmọrụ, na ihe nchọgharị ejiri.
Dabere na ibe weebụ gara, ụfọdụ peeji nwere ike ịnwe ụdị na-anakọta ozi gbasara gị, dị ka aha gị, koodu nzi ozi nọmba, adreesị ozi-e, wdg.
2. Iwu Anyị Kuki
A na-eji kuki iji bulie ahụmịhe weebụsaịtị gị dabere na mmekọrịta gị na saịtị ahụ n'oge gara aga. Ebudatara kuki ahụ ma chekwaa ya site na ihe nchọgharị whenntanetị mgbe a na-enweta weebụsaịtị oge mbụ. A na-eji kuki echekwara na nleta ọzọ iji welie nlele weebụsaịtị.
Enwere ike igbochi kuki ma ọ bụ ehichapụ ya n'ọnọdụ ndị a ebe ị kwenyeghị na ịnwe kuki. Agbanyeghị, site na ime nke a, weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị ebu ibu, ma ọ bụ ụfọdụ ọrụ weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ọfụma, n'ihi igbochi kuki.
Mara: Ugbu a, ọ nweghị kuki eji na weebụsaịtị anyị anakọta ozi enwere ike iji aka gị mata gị.
Otu esi ejikwa ma hichapụ Kuki
Enwere ike igbochi ma ọ bụ ehichapụ kuki site na ntọala ihe nchọgharị "Mbido" (ma ọ bụ "Ngwaọrụ"). Otu nhọrọ bụ ịnabata ma ọ bụ jụ Kuki niile. Nhọrọ nke abuo bu inara kuki puru iche na weebụsaịtị. Enwere ike ịtọ ihe nchọgharị ahụ ka ọ gbanwee ka o wee nwee ike ịgwa gị oge ọ bụla ị nwetara Kuki. Nchịkwa nke Kuki na usoro ihichapụ ha dịgasị iche iche na ihe nchọgharị ụfọdụ. Ihe nchọgharị niile dịgasị iche n'oge a. Iji lelee otu ihe nchọgharị gị na-ejikwa kuki, biko jiri ọrụ enyemaka na ihe nchọgharị gị.